[Review] Top 6 kem đánh răng Sensodyne loại nào tốt nên mua | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 6 kem đánh răng Sensodyne loại nào tốt nên mua | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 kem đánh răng Sensodyne loại nào tốt nên mua | Muasalebang in Muasalebang
Njengoba sonke sazi, ukunakekelwa kwamazinyo kungenye yezindaba ezibalulekile abantu abambalwa abazinaka. Ochungechungeni lwemikhiqizo ekhuthazwe kakhulu, udidekile ngokuthi iyiphi i-toothpaste ongayikhetha. Ungakhathazeki ngoba ngokubuyekezwa kwe-Sensodyne toothpaste ene-top 6 ehamba phambili, kuzosiza abantu bafunde ngomugqa. I-Sensodyne toothpaste kuyashisa manje. Ake sithole okwengeziwe mayelana nemigqa yomkhiqizo kanye nendlela yokusebenzisa umuthi wokuxubha i-Sensodyne kulesi sihloko!
1 Mayelana ne-Sensodyne toothpaste brand
2 Ingabe ukusebenzisa umuthi wokuxubha i-Sensodyne kuhle?
2.1 2.1 Izinzuzo ze-Sensodyne toothpaste
2.2 2.2 Ububi bomuthi wokuxubha i-Sensodyne
3 Top 6 best Sensodyne toothpaste okufanele ubhekisele kuyo
3.1 3.1 Ukulungisa kanye Nokuvikela umuthi wokuxubha amazinyo azwelayo
3.2 3.2 I-Sensodyne Full Protection Plus Okuxubha Amazinyo Okumhlophe
3.3 3.3 I-Sensodyne Yeqiniso Lomuthi wamazinyo omhlophe wokwenza amazinyo abe mhlophe
3.4 3.4 I-Sensodyne Pronamel Yokuxubha Amazinyo Emhlophe Elula
3.5 3.5 Umuthi wamazinyo we-Sensodyne Rapid Action
3.6 3.6 I-Sensodyne eyijeli yokuxubha amazinyo epholile
4 Imiyalo yokusebenzisa umuthi wokuxubha i-Sensodyne ukuze uthole impilo enhle yomlomo
Mayelana ne-Sensodyne toothpaste brand
Kusukela ekuqaleni kwayo ngo-1961, i-Sensodyne yazuza ngokushesha izinhliziyo zochwepheshe bamazinyo emhlabeni jikelele. Ngaphandle kwalokho, lona ngomunye wemigqa yomkhiqizo eyakha igama lomkhiqizo we-Sensodyne brand ye-multinational corporation GSK. Eqinisweni, leli qembu linendlunkulu yalo e-UK kanye nezinsiza eziningi emhlabeni wonke njengeFrance, Belgium, USA, Spain,…. Ngenzuzo yokuba nobuchwepheshe besimanje obuthuthukile nokulawula ikhwalithi okuqinile, I-Sensodyne toothpaste uzuze ukwethenjwa kwabathengi baseVietnam.
Ngaphezu kwalokho, i-Sensodyne iphinde ibe umugqa wokuxubha amazinyo okwelapha amazinyo abucayi athenjwa abantu abaningi. Ngenxa yomphumela wayo wokumhlophe ophumelelayo, akuthinti kabi ukwakheka koqweqwe lwawo.
Ingabe ukusebenzisa umuthi wokuxubha i-Sensodyne kuhle?
Izinzuzo ezimbalwa zalo mugqa wokuxubha amazinyo ngezansi zizosiza abantu baqonde kabanzi ngomkhiqizo, futhi benze isinqumo esisheshayo sokukhetha umkhiqizo.
2.1 Izinzuzo ze-Sensodyne toothpaste
Okokuqala, lesi umuthi wokuxubha onconywa odokotela bamazinyo abaningi ngoba ungokwemvelo ngo-100% futhi ungasetshenziswa izingane. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo ubuye ulungele abantu abanamazinyo abucayi.
Ngaphezu kwalokho, labo abasebenzisa umkhiqizo I-Sensodyne toothpaste Bonke banezimpendulo ezinhle. Isizathu siwukuthi babona umehluko kulo mkhiqizo uma beqhathaniswa neminye imikhiqizo abake bayisebenzisa esikhathini esidlule. Ngokukhethekile, iphunga elincane, igwebu elincane kanye nempilo yomlomo ethuthuke kakhulu. Akukhona lokho kuphela, amazinyo abe mhlophe ngaphandle kokulimaza koqweqwe lwawo lwamazinyo.
Inzuzo evelele, ku-Sensodyne toothpaste, okuqukethwe kwe-ejenti emhlophe kukhilimu nakho kuphansi kakhulu ukunciphisa ukuzwela kwamazinyo.
2.2 Ububi bomuthi wokuxubha i-Sensodyne
Ngomuthi wokuxubha we-Sensodyne anti-sensitivity, inkampani incoma ukuwusebenzisa kuphela iminyaka eyi-12 nangaphezulu. Ngaphandle kwalokho, I-Sensodyne toothpaste Intengo iphakeme kakhulu kunezinye izinhlobo zokuxubha amazinyo ezinomthamo ofanayo.
Ngaphezu kwalokho, kufanele uyisebenzise isikhathi eside ukuze uphumelele. Qaphela ukuthi umkhiqizo uvikela kuphela, uvimbela ukubola kwamazinyo nokunciphisa ukuzwela. Nokho, alikho ikhambi lokuzwela amazinyo noma ukubola kwamazinyo.
>>>Funda kabanzi: Izixuku zokuxubha zamazinyo eziphezulu ezi-8 ezaziwa kakhulu ezisebenza mhlophe ngo-2021
Top 6 best Sensodyne toothpaste okufanele ubhekisele kuyo
Uma uzibuza ukuthi yini okufanele ukhethe I-Sensodyne toothpaste ukuvikela impilo yomlomo ephelele. Ngakho-ke ungaphuthelwa yimikhiqizo engu-6 ephezulu engezansi.
3.1 Ukulungisa kanye Nokuvikela umuthi wokuxubha amazinyo azwelayo
I-Sensodyne Repair & Protect Extra Fresh Toothpaste ingumuthi wokuxubha amazinyo we-Sensodyne. Ngefomula ekhethekile enelungelo lobunikazi, lo mkhiqizo uzohlangana namanzi namathe ukuze udale ifilimu yokuvikela amazinyo. Ngaphezu kwalokho, lokhu kunamathela kuzocwebezela ukwenza i-hydroxyapatite. Lena i-mineral efanayo etholakala emazinyweni. Ngakho-ke, izogcwalisa izimbobo ezincane ku-dentin futhi isize ukunciphisa umthelela ku-nerve.
Ngaphezu kwalokho, kunenye ifomula enelungelo lobunikazi ebizwa ngokuthi i-Novamin. Lokhu kuyinhlanganisela ye-fluoride, i-calcium, i-sodium, i-silicon ne-phosphorus. Ngakho-ke, lo mkhiqizo usiza ukunciphisa ukuzwela futhi uvimbele ukubola kwamazinyo kanye nokunciphisa ithonya le-asidi koqweqwe lwawo lwamazinyo. Kodwa-ke, imikhiqizo equkethe i-Sodium Lauryl Sulphate inamandla okubangela ukucasuka. Ngesikhathi esifanayo, ukugqoka okuphezulu kwe-dentin (RDA) kuwububi balesi sigxobo samazinyo.
Intengo yomkhiqizo: 75,000 VND / 100g.
>>>Bheka ku: Imithi yokuxubha amazinyo yamalahle esezingeni eliphezulu engu-8 ehamba phambili yango-2021
3.2 I-Sensodyne Full Protection Plus Okuxubha Amazinyo Okumhlophe
Kuyabonakala ukuthi iSensodyne Full Protection Plus Whitening toothpaste iyisinqumo esihle kakhulu sokuvikela izinsini. Ngesikhathi esifanayo, ukusiza ukuphefumula umoya, susa i-plaque emazinyweni. Ukusuka lapho, qinisa uqweqwe lwamazinyo, wenze mhlophe futhi unciphise ukuzwela emazinyweni.
Izithako eziyinhloko ezisebenzayo ku-Sensodyne Full Protection Plus Whitening toothpaste zihlanganisa iFluoride ne-potassium nitrate. Ikakhulukazi, ingxenye ye-Fluor isiza ukuqinisa uqweqwe lwamazinyo ngenkathi i-potassium nitrate isiza ukunciphisa ubuhlungu obubukhali. Ukwengeza, kulokhu kuxubha amazinyo, kukhona i-silica enomphumela omhlophe osebenza kangcono. Ngaleso sikhathi, le nto izokhipha amanzi ukuze isize ukususa amabala nokupholisha amazinyo. Ngaphezu kwalokho, i-titanium dioxide pigment ishintsha ukukhanya, isize ekukhanyeni amazinyo ngesikhathi esifushane.
Intengo yomkhiqizo: 215,000 VND / 113g.
3.3 I-Sensodyne Yeqiniso Lomuthi wamazinyo omhlophe wokwenza amazinyo abe mhlophe
I-Sensodyne True White toothpaste iwumugqa womuthi wokuxubha osiza ekunciphiseni ukuzwela kanye nokwenza amazinyo abe mhlophe. Mayelana nezithako, lo mkhiqizo uhlanganisa imisebenzi emi-3 eyinhloko. Eyokuqala i-potassium nitrate esiza ukuvimba izimpawu zobuhlungu zokuthi i-dentin dentine ichayeke ekushiseni nokubanda. Ngakho kuzosiza ukunciphisa ukuzwela kwamazinyo. Okulandelayo, i-sodium fluoride esebenzayo isiza ukuvikela nokuqinisa uqweqwe lwamazinyo. Isithako se-sodium tripolyphosphate sibopha ukuze sisuse amabala ngempumelelo.
Inzuzo ye-Sensodyne True White ukuthi ayinayo i-bleach ekuqanjweni kwayo. Ngenxa yalokho, kunomthelela ekuvikelekeni okuphezulu kwamazinyo. Nokho, okubi okuyinhloko ukuthi kuzokuthatha isikhathi eside ukuze ubone imiphumela ebonakalayo.
Intengo yomkhiqizo: 105,000 VND / 100g.
>>> Bona okuningi: [Review] Top 9 best anti-sensitivity toothpaste 2021
3.4 I-Sensodyne Pronamel Yokuxubha Amazinyo Emhlophe Elula
I-Sensodyne Pronamel Gentle Whitening isetshenziselwa ikakhulukazi ukulwa nokuzwela kwamazinyo lapho udla ukudla okubanda kakhulu noma okushisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, indlela yokusebenza yomkhiqizo ukwethula i-fluoride nokugcina amaminerali ematheni ukuze kuvikelwe uqweqwe lwazo lwamazinyo kuze kube sezingeni eliphezulu, okusiza ukuvikela ungqimba loqweqwe lwemvelo loqweqwe lwawo kanye nokunciphisa ukuzwela kwamazinyo ngempumelelo.
Izinzuzo zomugqa I-Sensodyne toothpaste Lokhu kukwazi ukwenza amazinyo abe mhlophe ngobumnene. Ikakhulukazi, ngeke bapholise amazinyo njengeminye imikhiqizo, kodwa bangeze ama-micronutrients ukusiza ungqimba loqweqwe lwawo lube nzima futhi lube mkhulu. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kuqukethe inani elincane le-pigment emhlophe i-titanium dioxide.
Ngezinzuzo ezingenhla, lo mkhiqizo ulungele kakhulu amazinyo azwela kakhulu noma amazinyo aguquliwe ngenxa yoqweqwe lwemvelo olulimele. Iphuzu elihlanganisayo lalo mkhiqizo ukugqwala okuphansi, akuqukethe i-Sodium Lauryl sulphate. Kodwa-ke, lo mkhiqizo unomphumela wokuhlanza ongabonakali kangako kanye nemibono eminingi ephikisanayo mayelana nenkinga ekubunjweni kwe-Titanium Dioxide.
Intengo yokuthengisa yalo mkhiqizo emakethe imayelana ne-58,000 VND / 100g tube kuphela.
>>>Funda kabanzi: [Review] I-TOP 5+ Umshini wokwenza amazinyo abe mhlophe othengisa kakhulu ka-2021
3.5 Umuthi wamazinyo we-Sensodyne Rapid Action
Umuthi wokuxubha i-Sensodyne Rapid Action uyacwaningwa futhi uthuthukiswe kusetshenziswa isivinini ukuletha isixazululo esingcono kakhulu. Kusukela lapho, kuyasiza ukunciphisa ukuzwela ngemva kokusetshenziswa okukodwa nje. Ngakho-ke, abathengi baseVietnam banesixazululo sokusiza ukunciphisa ukuzwela ngesivinini esisheshayo nokusebenza kwesikhathi eside.
Ngokwakheka okusha ngokuphelele, okuhlanganisa usawoti we-tin(II) chloride oqukethe i-polymer ebopha i-bio kanye nokwakheka kwe-anhydrous. Ngesikhathi esifanayo, lapho uthintana namanzi, izokwakha i-bio-adhesive ngesikhathi sokuxubha. Ngesikhathi esifanayo, izokwakha ifreyimu emise okwejeli ukuze ilungise usawoti kathini ukuze uvikele amazinyo.
Ngaphezu kwalokho, usawoti we-tin(II) chloride owengezwe kufomula uzosiza ukwandisa ikhono lokuvala uphawu ngokushesha nangesikhathi eside kwamashubhu wamazinyo. Ngasikhathi sinye, kuyasiza nokwengeza i-fluoride ukwenza amazinyo abe mhlophe futhi ahlanzeke.
Intengo yomkhiqizo: 84,000 VND / 100g.
3.6 I-Sensodyne eyijeli yokuxubha amazinyo epholile
Ekugcineni, umuthi wokuxubha i-Sensodyne Cool Gel unomumo opholile wejeli oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaleso sikhathi, le gel yokuxubha amazinyo izokwakha ulwelwesi oluvala izinzwa ezizungeze amazinyo. Ukusuka lapho, nciphisa ngokushesha ukuzwela futhi unikeze umoya omusha.
Umkhiqizo wokuxubha amazinyo weSensodyne onefomula equkethe iGlycerin usiza ukususa amabala aphuzi enyangeni kuhlanganiswe nePotassium Nitrate ukunciphisa ukuzwela kwamazinyo. Ngakho-ke, umkhiqizo uletha umuzwa wokuphola lapho usetshenziswa, izimpawu ezipholile zobuhlungu nokuzwela 24/7. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo uqukethe neFluoride ukusiza ukuvimbela ukubola kwamazinyo ngempumelelo.
Intengo yesithenjwa: 53,000 VND / 100g.
>>>Bheka ku: [Review] Izitika eziyi-8 ezihamba phambili ezisebenza kahle kakhulu zokucwenga amazinyo zango-2021
Imiyalo yokusebenzisa umuthi wokuxubha i-Sensodyne ukuze uthole impilo enhle yomlomo
Ukuhlola I-Sensodyne toothpaste Ukuthi okuhle akusancikile ekutheni usetshenziswa kanjani umkhiqizo. Ukuze usebenzise i-Sensodyne toothpaste ngokuphumelelayo, udinga ukuqaphela ukuthi kufanele uxube amazinyo akho nge-Sensodyne cream kabili ngosuku. Ikakhulukazi, ungadluli izikhathi ezi-3 / ngosuku. Qaphela ukuthi akufanele ugwinye ukhilimu ngemva kokuxubha amazinyo.
Ngaphezu kwalokho, kufanele usebenzise okungenani inani elingu-2.54cm lomuthi wokuxubha ebhulashini elithambile. Bese, xubha amazinyo akho kahle okungenani iminithi elingu-1 isikhathi ngasinye. Kufanele usakaze amazinyo azwelayo ngokulinganayo, gwema ukugwinya nokukhafula ngemva kokuxubha.
Ikakhulukazi, kuyadingeka ukubonisana nodokotela wezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Isizathu siwukuthi izingane kule minyaka azivamile ukuhlushwa amazinyo azwelayo.
Iyini intengo yamanje ye-Sensodyne toothpaste?
Njengamanje, lo mkhiqizo usatshalaliswa kabanzi emakethe, ezitolo zezidakamizwa, ezitolo zezimonyo noma ezitolo ezinkulu. Ngaphandle kwalokho, ungaphinda uthenge kumasayithi e-e-commerce afana ne-Tiki, lazada, Shopee, Sendo, njll. Uma ufuna ukusebenzisa i-Sensodyne yamanye amazwe njenge-US (US), UK (UK), Germany, Thailand Lan, Japan , Australia, ungawathenga emakhelini aphathekayo anedumela elihle.
Uma ufuna Intengo yokuxubha amazinyo e-Sensodyne Uhlobo ngalunye luzoba nenani elihlukile. Amanani asukela ku-50,000 kuya ku-250,000 VND.
Ngokuvamile, i-Sensodyne iwumugqa okhethekile womuthi wokuxubha onconyelwe abantu abanamazinyo abucayi. Ngokubuyekeza I-Sensodyne toothpaste Kanye ne-top 6 engcono kakhulu yokuxubha i-Sensodyne, kufanele ukuthi uqondisise kabanzi ngalo mugqa wokuxubha amazinyo. Ukusuka lapho, ungazikhethela umuthi wokuxubha ofanelekile.
>>>Funda kabanzi: I-flosser yamanzi enekhwalithi ephezulu engu-8 esezingeni eliphezulu namuhla
Xem Thêm Kem trị nám Dongsung có tốt không? Giá bao nhiêu? Cách dùng hiệu quả | Muasalebang
Top 5 sữa Hàn Quốc loại nào tốt cho bé nhất được ưa chuộng | Muasalebang
Apple iPhone 7 32GB cũ, giá rẻ, đổi mới 30 ngày, có trả góp | Muasalebang